Ogaden News Agency (ONA) – Gobolka Shucuubta Koonfureed oo Wali Qalalaaso Kasii Socdaan.
Gobolka Shucuubta Koonfureed oo Wali Qalalaaso Kasii Socdaan.
Posted by Wariye Qaran	/ June 15, 2018
Waxaa wali mudaaharaad balaadhan iyo qalalaaso ka socdaan gobolka shucuubta koonfureed ee gumaysiga Itoobiya waxaana isku dhacyo badan ay ka socdaan magaalooyin badan oo gobolka kamida waxaana kamida magaalooyinkaas Awasa Dilla iyo Walqite.
Magaalada Walqite ayaa waxaa lagu dilay 3 qof oo shacab ah waxaa sidoo kale wiil kale lagu Awasa qalaalasaha gobolka hadheeyay ayaa wuxuu salka ku hayaa kacdoon lagaga soo horjeedo taliska woyaanaha ee wakhtigiisii dhamaaday.
Khasaaraha ka dhacay mudaaharaadkan ayaa aad u baaxad wayn waxaana la gubay guryo badan iyo hanti shacab, ciidan woyaanaha ayaa sidoo kale dadka toogan haya ayagoon u aabo yeelay nin.
Xaalada gumaysiga Itoobiya ayaa kasii daraysa marba marka kasii danbaysa waxaana mudaaharaado ka socdaan meelo badan waxaa kale oo jira khilaaf xoogan oo u dhaxeeya kooxda xukunka xooga ku haysata ee loogu yeedho EPRDF.